Archive du 20161103
Mirongatra ny fitsaram-bahoaka izay toa misy ambadika hafahafa. Kendrena izay hampiady sy hampifamono ny vahoaka mba hahafahana misikotra tsikelikely ny harenan�i Madagasikara.
Madagasikara 5 taona tsy misy mpanohitra ara-dal�na
Matoam-baovao iray misongadina eto Madagasikara hatramin�izao ny sata mifehy ny mpanohitra.
Tonga Rajoelina Mikonokonon-javatra ny HVM
Efa tonga eto Madagasikara tamin�ny faran�ny herinandro teo i Andry Rajoelina ary nihaona taminy teny an-tranony ny masoivohon�i Frantsa V�ronique Vouland Aneini afak�omaly.
Dinika ho Fanavotam-pirenena Niantso fiaraha-miasa amin�ny Eoropeanina
Nandefa taratasy niantefa tamin�ny lehiben�ny delegasionin�ny vondrona eoropeanina eto Madagasikara Antonio Benedito Sanchez Gaspard, omaly ny avy eo anivon�ilay vondrona politika dinika ho fanavotam-pirenena na DFP.
Fahafaham-baraka lava Efa rano fisotron�ny mpitondra
Voninahitra no katsahina amin�ny fihaonana Frankofonia ary ny lokon�ny Malagasy sy i Madagasikara iray manontolo no mila arovana saingy fahafaham-baraka no hiseho eto, hoy ny mpanao politika maro.
Harinaivo Rasamoelina � Tsy voafehy ny toe-draharaha eto�
Efa mitondra any amin�ny fifamonoana sy ny fandoran�olona ary ny fanaovana tsinontsinona ny fomba malagasy, hoy ny mpanao politika, Harinaivo Rasamoelina raha naneho hevitra tetsy Antaninarenina omaly
Tolojanahary Maharavo � Ho hita eo izay tena mpikarama an�ady �
Manoloana ny filazana fa mpikarama an�adin�ny antoko misy ny filoham-pirenena ny mpitarika ny hetsika afo sendikaly,
Taratasin�i Jean Inona no fika ?
Kaiza kaiza Jean a ! Dia inona izany no fika amin�izao zava-mitranga izao ? Tena tsy voafehinareo intsony anie, hono, ny tan�na e !
Kaomisera Ranaivoson Alexandre �Tsy ara-dal�na ny fitsaram-bahoaka�
Adihevitra tsy mety tapitra eto amin�ny firenena ilay fitsaram-bahoaka tany Mananjary izay nandoran�ny olona ilay vehivavy nanota fady ny 30 oktobra lasa teo.
Mpanao gazety Malagasy Mila omena antoka, hoy i Soava Andriamarotafika
Andro maneran-tany hanoherana ilay sokajin�olona mihevi-tena ho tsy maty manota nefa mahavita herisetra amin�ny mpanao gazety, no nomarihana iny omaly iny, hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao gazety,
Halatra jiro sy rano Hisy ny fitsirihana tampoka
Ho hentitra amin�ny halatra jiro sy rano mitranga eny anivon�ny fiarahamonina manomboka izao ny minisiteran�ny angovo sy ny harena ankibon�ny tany.
Hopitaly Miaramila Soavinandriana Ramatoa nitondra ody nisandoka ho mpitsabo
Ramatoa lehibe iray no tratra nisandoka ho mpitsabo teny amin�ny CENHOSOA na hopitaly miaramila eny Soavinandriana.
Lozam-pifamoivoizana Mahafaty ankizy 10 isan�andro
Mahatratra folo isan�andro raha araka ny tatitra azo omaly ireo ankizy mpianatra mamoy ny ainy manerana ny Nosy vokatry ny lozam-pifamoivoizana
Tsy hita lava !
Iray amin�ireo firenena nanasonia ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty i Madagasikara saingy izao iaraha-mahita izao fa zary lasa fomba amam-panao amina faritra maro ny fitsaram-bahoaka sy famonoan�olona ataon�olon-tsotra.